Mogadishu Journal » ONLF oo xabbad joojin ku dhawaaqday
Mjournal :-Ururka ONLF ayaa magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya maanta kaga dhawaaqday xabbad-joojin hal dhinac, ka dib muddo tobanaan sano ah oo ay dagaal kaga soo hor jeedday dowladda Itoobiya.
War kasoo baxay ONLF ayaa lagu sheegay in xabbad joojinta ay dhaqan galayso 12-ka duhurnimo ee 12ka Agoosto ay salka ku hayso “baaqa nabadeed ee hogaamiyaha Itoobiya Abiy Axmed, iyo talaabooyinka ay xukuumaddu qaadday ee ay aasaaska ugu dhigayso wadahadallo nabadeed”.
“Waxaan diyaar u nahay in maadaama dadkayagu ay muddo dheer dulmi tirsanayaan, in miis dushii lagu xalliyo dhibaatooyinka aan tirsanayno oo ay ka talin ka mid tahay oo nabad gelyo ka mid tahay, oo xuquuqo badan oo kale ka mid yihiin” ayuu sii raaciyey Caddaani.
Wuxuu sheegay in arrinta xabbad joojinta halka dhinac ah ay isla soo qaadeen dowladda Itoobiya.
Dowladda Itoobiya weli wax jawaab ah kama aysan bixin baaqaas.